I-Negro Nations namasiko - uCheikh Anta Diop (PDF) - I-Afrikhepri Fondation
Izizwe Negro Namasiko - Cheikh Anta Diop (PDF)
NUbudlelwano bamaNigro namasiko kuyimpi evezwe ngezigaba ezimbili. Okokuqala, impi yokulwela ukwethenjwa ebunzimeni eyadilizwa ukuhweba ngezigqila nokwenziwa kwamakoloni e-Afrika, okwabe kuyisigaba sokwakha kabusha, sokuqinisa lobu bunikazi ngezilimi zase-Afrika. UDiop uqala ngokubuza umbuzo obalulekile mayelana nokuthi bangobani abaseGibhithe lasendulo: Ingabe babengamaNegro?
Kusukela ngekhulu leshumi nesithupha kuya kweleshumi lamashumi amabili, abathengisi bezigqila baseNtshonalanga bangabaza ikakhulukazi ikhono labamnyama lokuba ngabantu futhi bathola impucuko. Lezi zimfundiso zazicabanga ukuthi impucuko yaseGibhithe kwakuwumsebenzi “wohlanga” olumhlophe noluxubekile. UDiop usitshela ukuthi lokhu kungabaza kusanda kwenzeka. Ingemuva layo yilokho okubizwa ngokuthi yi-hegemony yobuhlanga, leyo yabaseNtshonalanga abathile abasuselwa ebumhlophe, inganekwane eyayivumela futhi isekela ukuhweba ngezigqila eMelika kanye nokwenziwa kwamakoloni e-Afrika. Ngokusho kukaDiop, lokhu kungumzamo wokuvimbela ubuhlakani be-negroid. Yisiphi isisusa esingaba naso ngemuva komqondo wokudla ifa lonke “uhlanga”, abantu abamnyama, kuzo zonke izinkomba zabo zamasiko, lenhlangano, ubuhlakani noma ipolitiki? Akungabazeki ukuthi uyisiphule kancane kancane insumansumane kuNegro yokuthi akulethanga lutho esintwini nokuthi konke lokho okufeziwe phambilini bekungumphumela wezinye “izinhlanga”.
Lo mkhankaso wokuqamba amanga ngomlando wabantu beNegroid awukwazanga ukuhlala isikhathi eside. Kwakudingeka isuswe. Encwadini yakhe, uDiop ukhombisa ukuthi amaNegro ayengabokuqala ukusetha uhlelo lolwazi emikhakheni ehlukahlukene (ngokwesayensi, hieroglyphic, philosophical, cosmogonic, paradigmatic…). Ngakho-ke, kudala behamba phambili kweminye impucuko. Eqinisweni, ukuzalwa kwesintu kwaba ngowokuqala ukufinyelela esicongweni senhlangano yezenhlalo nezepolitiki. Abanye abantu abavela kwenye indawo, njengamaFenike, amaGrikhi, ama-Asiya noma ama-Arabhu, bavusa ulwazi oluningi olunzulu ngenxa yokuxhumana kwabo neGibhithe lasendulo.
UDiop uveza obaba bomlando, ikakhulukazi uHerodotus, uDiodorus waseSicily, uPliny Omdala noma uStrabo okwathi, nakuba engeyena uNegroids, ngesikhathi sabo waqaphela ngokwethembeka nangokungakhethi umlingiswa weNigro nemvelaphi yabantu basendulo. AbaseGibhithe. IBhayibheli, elihlonishwa iminyaka eyizinkulungwane, lihlala libika ubufakazi beGibhithe eli-negroid nelichumayo elaliphambi kwengxenye enkulu yomhlaba. Ukuqina kwempi yomlobi weGibhithe lasendulo eliphethwe ngokuphelele ngamaNegro kugxile ezahlukweni III, IV no-VI, ngenxa yomsebenzi onzima ohlanganiswe nezimpikiswano ezishiya kungabazeki ngemvelaphi yeNegroid IGibhithe. UDiop uyaphikisana nokudlulisa izimpikiswano ezimbalwa ezidiliza umqondo we-Negro Egypt: izinwele ezibushelelezi kanye nezinto ezibizwa ngokujwayelekile ngabaseGibhithe lasendulo, umbala obomvu onsundu wabanye; umbhalo oqoshiwe etsheni likaPhilae, izinsolo zokugqilazwa kwabamnyama ngaphambi kwesikhathi se-Aegean, njll. UDiop ube esefunda izikhungo namasiko ombuso wamaSabaean, ngaphambi kokwenza ukuxhumana phakathi kweGibhithe lasendulo ne-Afrika yonkana maqondana nemikhuba yezenhlalo nezenkolo. Ngaphezu kwalokho, umbhali ugcizelela ubudlelwano bemikhuba efana netotemism, ukusoka, ubukhosi, cosmogony kanye nenhlangano yezenhlalo.
Ezinye izingqikithi zifundwa encwadini enjengokuhlangana kweMeroitic Sudan neGibhithe; ubungqangi bokuqala nokufika kwamanye amakhosi aseSudan Meroitic. Siphinde sixoxe ngemvelaphi yempucuko esenkabeni yamazwe amaNigro, inani labantu base-Afrika abavela esigodini seNayile. UDiop uqeda le ngxenye yokuqala ngokuhlaziya umnikelo we-Ethiopia-Nubia neGibhithe empucukweni yabantu.
Ingxenye yesibili iyaheha. Ikhuluma ngezimpikiswano eziphathelene nezilimi zase-Afrika kanye nesidingo sokuzakhela ngalezi semantics. Sibona umzamo wokuhumusha imigomo ye-physics, ukusungulwa kwezinhlaka zohlelo lolimi ezithile ezifana neSerer noma iValaf. Imizamo kaDiop kule ngxenye ingachazwa njengeyobuqhawe, kepha ngasikhathi sinye yomile kulabo abangajwayele ukuhlaziywa kohlelo lolimi lwase-Afrika. Ngaphandle kokunemba nokunotha kwamanothi nezinkomba, umsebenzi (obhalwe ngesisekelo sethisisi yezobudokotela kaDiop) ungazuza ngokwaziwa ezingxenyeni ezithile ukuze kufinyelelwe izethameli ezibanzi. Iqiniso liwukuthi lencwadi yabhalwa ngesikhathi sayo, zombili izifundiswa zase-Afrika ezanqotshwa imivimbo yokwehliswa isithunzi "kohlanga" lwazo nakwabanye abantu baseNtshonalanga ababedicilela phansi ukuqwashiswa kwabamnyama ngegalelo labo elikhulu. kuyo yonke eminye impucuko.
I-Negro Nations and Culture, ebhalwe nguDiop ethathwa njengomunye wamaphayona e-Afrocentricity, izohlala iyinto yakudala yomzabalazo wabamnyama emhlabeni wonke. Iveyili lokukhanya lesikhathi esedlule saleli zwekazi selisusiwe ngenxa yombhalo waseDiopian okhombisa ngokwesayensi ukuthi i-Afrika ayisiyona ubudlelwane obubi bomlando, bempucuko. Ngokusho kuka-Aimé Césaire ongasekho, incwadi kaDiop "yiyona enesibindi kunazo zonke ebhalwe yiNigro kuze kube manje futhi engangabazeki ekuvukeni kwe-Afrika".
Izizwe Negro Namasiko: Kusuka Kudala kwe-Negro yaseGibhithe kuya ezinkingeni zamasiko e-Afrika ...
Okusha okungu-6 kusuka ku- € 15,20
Kusetshenziswe okungu-4 kusuka ku-14,90 €
Thenga i- € 15,20
Kugcine ukubuyekezwa ngoMashi 8, 2021 3:35 PM
UKelvin Doe, osemusha oseSierra Leone, wenza i-generator kagesi
Imisebenzi yeHercules - Alice Bailey (PDF)
I-Body Academy Paris, isikole sokuqala sokukhanda izinwele esikhethekile e-Afro nase-European hair